Best Twitter Atụmatụ Site na Ọrụ Ntanetị
Twitter bụ otu n'ime usoro ntanetị mgbasa ozi ọha na eze na-ewu ewu. Ọ bụ ụzọ dị mfe ị ga-esi nwetakwuo ndị na-eso ụzọ, tinyekwuo pịa, ma na-ekere òkè n'ịntanetị. Site na ịkekọrịta ọdịnaya gị na Twitter, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ọtụtụ nhụwa, dabere na ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ gị. Twitter na-egosipụta ọtụtụ ohere ahịa na-enye ohere dịgasị iche iche nke ikesa ọdịnaya, itinye ndị mmadụ n'Ịntanet, na ịkwalite ụdị gị. N'ebe a, Artem Abgarian, Semalt Onye Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ndị Na - ahụ Maka Ọrụ, tụlere ụfọdụ ụzọ kachasị mma iji nweta uru nke tweet gị na akụkọ mgbasa ozi.
Nhazi oge tweet gị ugboro ugboro
Ị ghaghị ịṅa ntị na ịhazi usoro tweets gị na ihe osise na oge kachasị mma. Otu n'ime isi ihe ndị anyị mehiere bụ na anyị anaghị ekere òkè posts ma gharakwa ịmezi akaụntụ Twitter anyị - expert IT consulting silicon valley. Ọ dị mkpa ịkekọrịta ihe na itinye ihe dị ka okpukpu atọ na ugboro anọ n'ụbọchị iji mee ka ndị mmadụ nwekwuo mmasị na tweet gị. Ime otú ahụ ga-ekwenye na ị na-amụba ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso Twitter gị ma nwee ike gbasaa okwu gị n'ụzọ ka mma. A na-atụ aro ya na ị na-eme usoro oge ọ bụla ka ụmụazụ gị nọgide na-arụ ọrụ.
Mepụta ebe obibi ọhụrụ na ndepụta ọhụrụ
Ihe ọzọ ị nwere ike ime bụ ịmepụta otu ma ọ bụ abụọ homepages na nchịkọta ohuru na itinye ọdịnaya. Jiri uru mgbasa ozi Twitter ma lekwasị anya 'igbe' iji zaa ajụjụ niile. ị ga - emesị nweta ọtụtụ ntanetị Twitter, si otú a na - eme ka saịtị na ntanetị gị dịwanye njọ na netwọk Ịntanetị nke Twitter nwere ike ịbụ nke ọ bụla ma ọ bụ isiokwu, dabere na mmasị gị na ihe ndị na - ege gị ntị chọrọ
Debe ọdịnaya gaa Twitter
Ọ bụrụ na ị kwenyere na ịkekọrịta otu ugboro n'otu oge na Twitter zuru oke, ka m gwa gị na ị meela ndudue jọgburu onwe ya. Ndị ọkachamara na ndị ọkachamara dị iche iche na ndị na-ere ahịa na dijitalụ na-ekwu na iweghachite ọdịnaya dị na Twitter na Facebook dị oké mkpa maka ịlanarị akara na ịntanetị. Ya mere, ị gaghị akwụsị ịkekọrịta ọdịnaya ozugbo e kesara ya. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịkekọrịta ihe ndị dị ụtọ ugbu a ma jide n'aka na arụ ọrụ aka na-arụ ọrụ nke ndị ọrụ.
Na-eleghara usoro ndị na-esonụ
Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị gbasara usoro nsonye na-esonụ. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịnọgide na-arụsi ọrụ ike ma nọgide na-ekerịta ihe ọhụrụ na Twitter, n'agbanyeghị ole ị na-eso n'Ịntanet. Lezienụ anya na ọrụ ndị ọrụ gị karịa ịlele otu nchịkọta na-esonụ ma ọ bụ ugboro abụọ n'ụbọchị. Mee ka m kwuo ebe a na ọ ga-eme ka mmekọrịta gị na mgbasa ozi gị dịkwuo mma ma nwee ike ịme ka ika gị dịrị ndụ n'ihu ndị na-eso ụzọ Twitter gị ruo oge niile.
Na njedebe, anyị ga-achọ ikwu na e nwere tọn nke ihe omume Twitter na ngwaọrụ ndị nwere ike ijikwa àgwà ụmụazụ gị. Ị nwere ike iji ngwaọrụ ndị a emeghe ma gbochie akaụntụ ụgha. Jide n'aka na ụmụazụ ị ga - enweta bụ ezigbo na ihe ziri ezi ka àgwà gị na ebe nrụọrụ weebụ gị nakwa dịka mgbasa ozi gị na-elekọta mmadụ ruo mgbe ọgwụgwụ.